INKOSANA UTATA KUNYE NEHYENA: UKUPHONONONGWA KWEALBUM YECOSMIC THRILL - IINDABA
I-Albany emo band isinika ubugcisa obubambekayo, uhambo lweqhawe elilandela umfana onokoyisa umhlaba ukuba angashiya ukhuko lwakhe.
Dlala iTrek Ndilahlekelwe bubomi bam -INkosana uTata kunye neNgcukaUkuhamba Ibhendi / Thenga
KwiPrince Daddy nakwindalo yeHyena, uTitus Andronicus ’ Ukubeka iliso yeyona albhamu inkulu eyakha yenziwa. Ayikho i-albhamu enkulu ye-punk, okanye eyona nto ibhetele kwiminyaka elishumi-enkulu njalo, ungcono no Izandi zezilwanyana zasekhaya , Kulungile ikhompyutha , kwaye Ebonisa Dibanisa. Baye nabo igama American Idiot kwaye Umnyama omnyama phantse kulo lonke udliwanondlebe kwi-albhamu yabo yesibini engxolayo Abafuna izithsaba zeCosmic, ukuya Disney isandi esibhalwe liqela lomculo wepunk eyenzelwe iseti yeminqweno ethe ngqo-benze ubugcisa be-fuck-up, uhambo lweqhawe elilandela umfo onokuthi aloyise ihlabathi ukuba angashiya ibhedi yakhe.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uSuku oluGreen, iMy Chemical Romance, kunye noTitus khange bathathwe ngokungathí sina ngaphambi kokuba bahlasele i-canon ye-rockist-bona, ngokulandelanayo, liziko le-pop-punk ekurhwebeni okuzinzileyo kwezorhwebo, ii-avatars zohlobo olwahlwaywa ngokubanzi lwe-emo, kunye neqela elaziwa kakhulu ngokudlala amatheko echibini laseNew Jersey. INkosana uTata kunye neNgcuka baqala kokungalunganga okukhulu-kokunye, babizwa ngokuba yiPrince Daddy kunye neHyena, kwaye bakhokela amanani kwi-punk-rock subset eyaziwa njenge khazimla , ukhula emo, party emo okanye meme-o. Ukuchasana nobugcisa, ubuchwephesha obusebenza njenge-Hotelier okanye iHlabathi yindawo entle kwaye andisoyiki ukufa, la mabhendi adlala imiboniso engaphantsi enezingoma zokuzinyanga ngokwakho, unxunguphalo kunye noxinzelelo lokuzinyanga ngokwakho njengokuzonwabisa kunye nokudlula njenge ipleyiti yokuluma iBagel okanye Bagel Ukuluma ingoma yengoma .
AbaCuphi beCosmic licwecwe lecwecwe elinamacandelo amathathu, nangona elinye linenjini yesakhiwo malunga nokuphakama nokubukela umabonwakude- isenzo sokugqibela, apho umntu anokulindela uhlobo oluthile lwesityhilelo sokuziphatha, iihenjisi kumkhondo olandelelanayo osihloko sithi C'mon & Smoke Me Up and Klonopin. Uzamile ukubeka uxwebhu kumnyele kwi, Kory Gregory shrieks, ukonakalisa iacoustic eqhubela phambili yokuvula ikatala Ndilahlekelwe bubomi bam. Ingoma ibalisa ngamava akhe ngokuthatha I-LSD-laced Sour Patch yabantwana kunye nokuchitha iminyaka ezibuza ukuba ingaba uza kuyirhabula ngokusisigxina na ubuchwephesha bengqondo yakhe. Phambi kokuba ehle, wabukela IWizard yeOz kwaye wayibona njengesikweko kubomi bakhe; wayenomdla kwaye emsulwa ngokwaneleyo ukuba abone esi sityhilelo njengendawo engafakwanga yokubhalwa kwengoma ye-punk-rock.
Kuyo yonke icwecwe, ibhendi ibalaselisa uluhlu olungacingekiyo ngaphambili-ukhathalelo ukusuka kwindawo yemidlalo yeqonga (Ingxoxo), ukuya kwi-brassy Broadway punk (i-Ursula Merger), i-Irish alcohol interludes (i-Dream Nails) kunye ne-sludge eyoyikisayo (Ukuzama amaxesha), uxakeke impelaveki yonke Fest kwi-40 okanye kwimizuzu. Amagwegwe angenazintloni kunye ne-Sum-41 snotty, nganye nganye ifana nokufaka iqhosha lenyukliya enkulu ebomvu. Amazwi kaGregory anegazi luthando olufunyenweyo nkqu nakubalandeli bebhendi- ucula ngathi uyakwala ukufakelwa komgaqo-tracheal- kodwa zizithuthi ezigqibeleleyo zokuzicekisa (ndiyathandeka ndiqinisekile ukuba ndizokufa kwixesha elizayo Ndindedwa egumbini lam lokulala, okanye ndenza ngathi ndilele, ungazikhathazi ngokuthetha nam).
Ngaphandle kokwahlukana kwendalo kwezwi likaGregory kunye notyekelo lokuziphatha gwenxa, AbaCuphi beCosmic banqwenela uguquko lobuqu kunye nokuphakanyiswa koluntu-amalungu eStrange Ranger kunye neRemo Drive anikela ngezwi, ngelixa uDiva Sweetly, Oso Oso, noKississippi bonke bevela kwividiyo ULauren (Umkhondo 2). UZoe Reynolds kaGregory noKississipi ngenene wazibandakanya neqonga kuFest . UGregory uyibiza njenge-albhamu yokuzingca, nangona umculo ucebisa ngenye indlela: AbaCuphi beCosmic inokuthi yenzelwe ukuba ibe yiNkosana uTata kunye nomsebenzi wobugcisa weHyena, kodwa kuyacaca ukuba ibonisa umfana uGregory akasenamdla wokuba.
jazmine sullivan iindaba ezimnandi
impindezelo yabaphuphi iii
impungutye ebalekayo yejackie
iiplagi endadibana nazo